Ummeli Wezezakhiwo ZaseCannabis ePeoria, e-Illinois | Thomas Howard
Izingqinamba Zezindlu zeCannabis
Izingqinamba Zezindlu zeCannabis.
Ibhizinisi le-cannabis belilokhu likhuphuka e-Illinois selokhu kwaba semthethweni ukwenziwa kwe-cannabis yezokwelapha. Bobabili abathengisi nabalimi manje baqhuba ibhizinisi ngokukhululeka, ngaphandle kokwesaba ukuphazanyiswa yiziphathimandla. Kodwa-ke, ngisho nangendawo enempilo yebhizinisi, i-cannabis ihlala iyisidakamizwa esiphikisanayo. Umthetho osemthethweni ukusetshenziswa kwe-cannabis yezokwelapha usala nohlaka olucacile, futhi ukwahlukaniswa kwamabhizinisi okuhweba nge-cannabis kuseyinkinga enkulu.
Kunezinkinga eziningi ezingokomthetho eziphathelene negunya lokutshala nokuhweba ama-cannabis ezindaweni zokuhlala. Akumangazi ukuthi kuye kwaba nokuvela kwezinkinga zezindlu ze-cannabis. Ukungaqondi kahle phakathi kokuphathwa kwempahla nabathengisi be-cannabis kuholele ekulahlekelweni kwemali emthethweni kanye nokuphazamiseka kwebhizinisi kubathengisi abaningi.
Uma ungumthengisi we-cannabis, futhi utholakala phakathi kwengxabano, udinga ukuthola ummeli ozokuvikela wena nempahla yakho. Njengoba izindaba zentengiso ye-cannabis zidinga okungaphezulu kolwazi olujwayelekile lwemithetho, kufanele uqashe uchwepheshe oye wabhekana nezakhiwo nomhlaba, kanye namacala ahlobene ne-cannabis.
Bamba iqhaza Ummeli Wezinkinga Zentengiso Yezindlu Zangempela ZaseCannabis ePeoria, e-Illinois.
Ukuhweba nge-cannabis ePeoria, e-Illinois, kuyachuma. Kodwa-ke, izingqinamba ezizungeze ubukhona nokuziphatha kokulima nokuhweba ngemikhiqizo ye-cannabis kusaqhubeka. Uma ungumhlali wasePeoria, xhumana nathi ukuthola usizo ekubhekaneni nezinkinga ze-cannabis yezindlu. Izinsiza zethu zifaka:
Sizosiza Ekuvikeleni Izimpahla Zakho Nezindawo Zakho
Iningi labantu livame ukulahlekelwa yizimpahla zebhizinisi labo, zomzimba, nezengqondo emacaleni aphathelene nokuhweba kwe-cannabis. Uma ukuphathwa kwakho kwezezakhiwo kuphakamisa ibhizinisi lakho icala, silapha ukusiza. Sizoqinisekisa ukuthi zonke izingcezu zakho zephepha lakho zivikelekile ngesikhathi sokulalelwa. Uzogcina ilungelo lokuba nempahla nezakhiwo zakho kunoma yisiphi isehlakalo.
Sizovikela Amalungelo Akho Ekuhwebeleni amaCannabis
Akunasizathu sokuthi kungani unqatshelwe ilungelo lokuhweba nge-cannabis. Noma yimuphi umonakalo odaleke ebhizinisini lakho ngenxa yezinyathelo zomthetho kufanele unxephezelwe ngokwanele. Ngamafuphi, izingqinamba zezindlu nomhlaba kufanele zixazululwe ngaphandle kokulimaza ukuhweba kwakho. Kufanele futhi unikezwe ithuba lokuvikela isenzo sakho.
Sizokusiza Ukufinyelela Isinqumo Esiqhamukayo Senkantolo
Uma ungafisi ukuya ezimpini ezinde zenkantolo maqondana nokungavumelani kwakho, abameli bethu bochwepheshe bazokusiza uxazulule izinkinga ngaphandle kwenkantolo. Ngezingxoxo kanye nokulamula, amaqembu amaningi ayakwazi ukuthola izixazululo ezindabeni ezinzima. Ungasindisa ibhizinisi lakho izinkulungwane zamaRandi ngokugwema inqubo yenkantolo ende nengcolile.
Ungangeni kunoma iyiphi inkontileka ye-cannabis yendawo yokuhlala ngaphandle kokuba nommeli etafuleni. Uma uzithola us kumbango, ungavele enkantolo wedwa. Khetha ummeli othembeke kakhulu ePeoria, e-Illinois ukukusiza ukuphatha icala lakho. Ummeli wethu omkhulu, uThomas Howard, unesipiliyoni esikhulu kumacala e-Cannabis nawokuthengisa izindlu. Uzokusiza uthole umphumela omuhle kunoma yiluphi uhlangothi oluthinta izingxabano ze-cannabis real estate.